Whimsy Hehy Politika
Ny vazivazy tsara indrindra momba an'i Ivanka Trump
• Vazivazy farany amin'ny alina
• Mahatsiaro tena Donald Trump Memes
"Nametra-panontaniana i Ivanka Trump taorian'ny nahalalany ireo mpiasan'ny orinasa Shinoa iray izay nahatonga ny làlan'ny lamaody hahazoana $ 1 isan'ora." Tena nanahiran-tsaina an'i Ivanka ny Filoha Trump. "Toy ny hoe: 'Miandrasa anao ny mpiasanao?'" James Corden
"I Ivanka Trump dia niboridana tany Alemaina. Toa nilaza tamin'ny mponina ao Berlin izy hoe: 'Fa maninona moa raha mandao ny rindrina tsara ianao?'" -Conan O'Brien
"Tany Alemana dia nilaza tamin'ny vahoaka i Ivanka Trump fa ny rainy dia" tompon'ireo fianakaviana manohana "ary dia niondrika izy. Nilaza i Ivanka fa gaga izy ary nasaina nanokatra tamim-pitiavana foana." -Conan O'Brien
" Ny Ivon'ny Filoha Trump, Ivanka, dia hanana ny biraony manokana ao amin'ny Trano Fotsy. Koa amin'ny farany dia manana vehivavy antsoina hoe Trump isika izay te ho any amin'ny Trano Fotsy. Ivanka zanakavavin'ny Trésident Trump dia manana ny biraony manokana ny Trano Fotsy. Koa amin'ny farany dia manana vehivavy antsoina hoe Trump isika izay maniry ny ho ao amin'ny trano manga. " -Conan O'Brien
"Ny zanakavavin'i Donald Trump, Ivanka Trump, dia nibitsiboka tamin'ny fihaonambe momba ny fandraharahana vehivavy tany Alemana tamin'ny talata teo, rehefa nilazalaza ny rainy ho" tompon-daka manohana fianakaviana maro "izy. Fantatrao fa eo amin'ny andaniny tsy an-kijanona ianao rehefa mitaona anao i Alemaina. " -James Corden
"Hatramin'ny naha filoham-pirenena azy, dia tsy namela ny firenena i Donald Trump - niala an-daharana ny klioban'ny firenena izy.
Androany anefa, nandefa an'i Ivanka ho any Berlin i Trump mba handray anjara amin'ny fihaonam-behivavy, ka mahatonga azy ho Tromp voalohany hanatrika ny valan-dresaka ho an'ny vehivavy izay tsy nahitana fifaninanana akanjo gasy. "- Stephen Colbert
"I Ivanka dia niresaka tamin'ny tontonana mitondra ny lohateny hoe 'Vehivavy manentana: mampiroborobo ny fampiroboroboana ny vehivavy.' Ary ny fianakaviana Trump dia manana tantara lava be momba ny vehivavy manentana ny fanahy - handeha sy handohalika, handosirany amin'ny efitra fitafy. " -Stephen Colbert
"Raha niresaka momba ny rainy i Ivanka sy ny maha-tompon-dakan'ny fialan-tsasatra azy, dia nihaona tamim-pahanginana sy herisetra avy amin'ny mpihaino izy. Tsy dia rariny loatra izany, Trump dia manohana ny fialan-tsasatry ny fianakaviana. . "-Stephen Colbert
"Tao an-damosiny, nanam-piheverana ny hamindrana fitafiana an'i Ivanka izy ireo, noho izany dia noraisin'izy ireo an-tsokosoko tahaka an'i Adrienne Vittadini izany. Izany no tsy mahalaza ny anaran'ny Tromp - ny akanjony dia napetraka tao amin'ny Fandaharan'asam-piarovana." -Stephen Colbert
"I Ivanka dia hisintona ny zava-niainany nandritra ny 20 taona teo amin'ny sehatra iraisampirenena sy an-tokantrano fa nahazo mivarotra sandal ny Nordstrom izy. Teo amin'ny teôlôjia izany. Avelao izy hiditra ao ka misy olona afaka mihazakazaka sy maka azy, raha ny rainy no manapa-kevitra ny hikomy na inona na inona. "- Jimmy Kimmel
"Tsy maharesy lahatra azy ny fiovan'ny toetr'andro ny fiovan'ny toetr'andro dia tsy lakolosy Shinoa; Ny olona miaraka amin'ny dadany dia mahafantatra fa manana herim-po tsy mety resy izy ireo. Tsy afaka manova ny hevitry ny raiko aho momba ny cheminaly mandritra ny adiny valo! . . . Ny ankamaroany, i Ivanka dia nanakatona ny 1 amin'ny 24 amin'ny baikon'ny mpanatanteraka. Tsy misy afa-tsy ny Tiffany [Trump] no nijanona.
Saingy ity rakitsoratra manaraka ity dia tsy nanakana ny olona tsy hieritreritra an'i Ivanka ho Lady Galadriel ao amin'ny filankevitra fotsy. "-Samantha Bee
"Azoko. Ny olona dia mahazo fampiononana noho ny fiheveran'ny vehivavy feminista mandroso ao amin'ny Trano Fotsy. Izay holazaiko hoe: 'Raha tianao izany, dia tokony hifidy izany ianao !' "-Samantha Bee
"Bed Bath & Beyond dia vao haingana nanambara fa mbola hivarotra ny vokatra Ivanka Trump izy ireo. Noho izany, aoka ho azo antoka fa haka ny andalana vaovao momba ny hoe 'Ahoana no Matory Amin'ny Alina?' ondana. " - Seth Meyers
"Michael Flynn, mpanolotsaina teo aloha momba ny filaminana nasionalin'ny filoha Trump, dia nanambara androany fa vonona ny hijoro vavolombelona amin'ny FBI amin'ny fanadihadiana Rosiana ho takalon'ny tsy fananana zo izy. Rehefa nahare izany i Ivanka Trump dia naka ny boaty entana izy ary nanomboka nihemotra tsikelikely ny Trano Fotsy. " -James Corden
"Nanazava i Ivanka Trump fa mikasa ny haka kilasy famaranana izy amin'ity fahavaratra ity miaraka amin'ny zanany vavy 5 taona.
Avy eo, ity fianjerana ity, ny 5 taona dia hanomboka hiasa ao amin'ny Trano Fotsy. "-Conan O'Brien
"Namarana ny resadresaka tamin'ny gazetiboky Cosmopolitan i Ivanka Trump satria nahatsapa fa 'tsy rariny' ireo fanontaniana. Mazava ho azy fa takatry ny saintsika izany, ny ankamaroantsika dia narefo noho ny fitsangatsanganana ara-politika ny gazetiboky Cosmopolitan. " -Conan O'Brien
"I Ivanka Trump dia nanapaka fanadihadiana fohy niaraka tamin'i Cosmo noho ny zavatra nolazainy fa ny 'disadisa.' Izany hafahafa izany satria hoy ny mpanadihady rehetra hoe, 'Noho izany, ny dadanao dia Donald Trump , marina?' "-Conan O'Brien
"I Ivanka Trump dia voalaza fa nahazo birao tao amin'ny Trano Fotsy, ankoatra ny fahazoana fiarovana sy ny fitaovam-pifandraisana avy amin'ny governemanta. Na dia tsy mampino aza, dia i Donald Trump ihany." -Seth Meyers
"I Ivanka Trump dia nahazo birao tao amin'ny Trano Fotsy ary nahazo ny fahazoana fiarovana ambony indrindra izy. Haka toerana ao amin'ny trano fonenana izy, izay hiantsorohany ny traikefany eo amin'ny sehatry ny raharaham-bahiny sy an-tokantranony 20 taona izay azony tamin'ny fivarotana kapa Nordstrom. " -Jimmy Kimmel
"I Ivanka Trump dia nahazo birao iray tao amin'ny elatry ny Tandrefana na dia nilaza aza fa tsy handray andraikitra ara-dalàna eo amin'ny fitantanan'ny rainy izy. Nilaza ny fitondram-panjakana fa i Ivanka dia hiasa toy ny" maso sy sofina "ny rainy, izay midika fa handeha Mandehana manalavitra ny Trano Fotsy manao hoe, "miteny an'i Dada aho!" "-James Corden
"Faly aho fa i Ivanka no ho" maso sy sofina "ny rainy. Ary izay rehetra ilaintsika dia ny haka ny vavany ary ny tweet-ny." -James Corden
"Ny ankizy Trump, Don Jr., Ivanka ary Eric, dia nitondra ny fianakaviany tamin'ny fiarandalamby mankany Aspen, izay nahafinaritra azy ireo, hoy izy ireo hoe:" Andraso raha eto izahay, iza no mijery an'i Dada? " 'Aao, andeha handeha, mandehana amin'ny fiaramanidina izao.' "-Jimmy Fallon
"Rachel Maddow dia nitatitra tatitra iray tamin'ny alina lasa teo namoaka ny ampahan'ny tranon'ny Filoha Trump tamin'ny 2005. Ny ampahany izay nanambarany an'i Ivanka sy i Donald Jr. ho mpialokaloka ary nanandrana nanoratra an'i Eric ho very." -Seth Meyers
"Ny Filoha Trump dia nanoratra zavatra mahafinaritra momba ny vehivavy amin'izao fotoana izao, hoy izy nisioka," Manana fanajana lehibe ho an'ny vehivavy sy ny andraikitra maro atolony izy ireo ... Tena zava-dehibe amin'ny tontolon'ny fiarahamonintsika sy ny toekarenantsika izany. "Tsy nanoratra izany izy. Tsara izany, tsy misy fomba nanoratany izany. Tsy fantatro raha nanana ny findainy androany i Ivanka na inona. " -Jimmy Kimmel
"Nilaza i Scott Baio fa tezitra amin'i Nordstrom izy noho ny fametavetana ny akanjon'i Ivanka Trump. Fa ny ankamaroany dia ny adala Baio amin'ny Nordstrom noho ny famerenany ny ora niasany tao amin'ny trano fanatobiana." - Conan O'Brien
"Ny tahirin-tsolika Nordstrom dia niakatra taorian'ny namelezan'ny Filoha Trump azy ireo tao amin'ny Twitter noho ny nandalovan'i Ivanka ny fitafiana akanjo. Avy eo dia hoy ny RadioShack:" Tsy mety ve ny manenjika antsika? "-Jimmy Fallon
"Nilaza ny sekretera mpitantsoratry ny tranon'ny White House, Sean Spicer androany fa ny fanapahan-kevitr'i Nordstrom dia hampitsahatra ny fametrahana ny tsipiky ny fitafin'i Ivanka Trump dia" fanafihana ny politikan'ny filoha sy ny zanany vavy. "Izany no nolazain'ny vavany, hoy ny maso:" Manampy ahy, ny lehibeko dia diso! "" Seth Meyers
"Nilaza i Sean Spicer fa ny fanapahan-kevitr'i Nordstrom dia ny hanakana ny fikarakarana ny akanjon'ny fitafiana Ivanka Trump dia fanafihana ny filoha, ary izy koa dia miala amin'ny Lehiben'ny lehilahy, satria tsy tiany ny fomba fijeriny." -Seth Meyers
"Ny mpivarotra dimy hafa, anisan'izany i Neiman Marcus, dia nanambara fa namotipotika ny lamaodin'i Ivanka Trump izy ireo, raha nanambara kosa i AutoZone fa tsy hihoatra ny volony i Eric sy Donald Jr." -Seth Meyers
"Androany, nihaona tamin'i Donald Trump i Al Gore mba hiresaka momba ny fiovaovan'ny toetr'andro. Mba hanandramana hanazavana izany amin'ny teny hoe Trump dia takatr'i Gore, hoy izy: 'Mihamahazo kokoa ny planeta noho ny zanakao Ivanka.'" -Conan O'Brien
"Ny filohan'ny biraon'ny etika ao amin'ny governemanta dia nilaza omaly fa ny hany làlana ahafahan'i Donald Trump hanalavitra tanteraka ny fifandonana mahaliana dia ny hivarotany ny fananany ary hametraka azy ireo ho fitokisana amin'ny jamba." Toa toy ny hoe: 'Tsara, matoky an'i Ivanka aho.' " -Seth Meyers
"Ny sekreteran'ny mpanoratra gazety ao amin'ny tranon'ny White House] dia nilaza i Sean Spicer androany fa ny fanapahan-kevitr'i Nordstrom dia hampitsahatra ny fametrahana ny tsipiky ny fitafin'i Ivanka Trump dia" fanafihana ny politikan'ny filoha ary ny zanany vavy. "Izany no nolazain'ny vavany, hoy ny maso:" Ampio aho, Malahelo ny lehibeko! "-Set Meyers
"Collaborationist; kanosa; Eto izahay dia miombon-kevitra: mifandraika amin'ny hafa amin'ny asa tsy ara-dalàna na ny fanaovana ratsy. Oh, miandrasa, dia manana 'herim-po ho an'ny tsara sy mampisy fiantraikany tsara' izy eo ambany fitondran-tena mifanohitra amin'ny. ... Tsy afaka manova ny famaritana fotsiny ianao mba hahatonga anao ho tsara kokoa, "hoy i Colbert nanohy. "Toy ny hoe, 'Raha ny Nazi dia midika hoe ady amin'ny zon'ny sivily, dia eny, izaho dia Nazia lehibe.'" -Stephen Colbert
Trump Family Family
"Nilaza i Donald Trump tamin'ny alàlan'ny hetsika fanentanana omaly fa hametraka ireo mpitsoa-ponenana Siriana any amin'ny faritra azo antoka, ary hametraka ny firenena Afovoany Atsinanana ho azy ireo, ary hoy ihany koa: 'Tsy misy zavatra toy ny manao zavatra amin'ny volan'ny hafa.' 'Nolazainao hoe, zazakely,' hoy Melania . " -Seth Meyers
"Androany Trump dia nilaza fa mino ny fampijaliana ireo gadra izy. Izany no vaovao ratsy amin'i Melania." -Jimmy Kimmel
"Omaly ny tsingerintaona nahaterahan'i Donald sy i Melania Trump omaly. Raha nanontaniana ny fanomezam-boninahitra faha-12 taonan'ny fampakaram-bady, dia hoy i Trump: 'Tsy fantatro, tsy mbola nataoko izany hatramin'izao.'" -Jimmy Fallon
"Ny New York Times dia mitatitra fa ny vadin'i Trump, Melania sy Barron, zazalahy 10 taona, dia hitoetra ao amin'ny Trump Tower fa tsy miditra ao amin'ny Trano Fotsy amin'ny volana Janoary. Toa tsy te haka an'i Barron hiala ny sekoliny i Melania, ary fony izy Nanontany azy izy hoe toy ny hoe: 'Eny, eny, noho ny sekolin'i Barron, izany no antony tsy tiako hiarahana amin'i Donald.' "-James Corden
"Nilaza i Eric Trump vao haingana fa ny" Trump Organization "dia mety 'tsy hanaraka ny fifanarahana ara-barotra ao Rosia amin'ny taona vitsy manaraka.' Mety 'tsy hiteny amintsika koa izy ireo raha manao izany.' -Seth Meyers
"Raha niresaka momba an'i Donald Trump i Eric, zanany lahy dia nivoaka tamin'ny fampielezan-kevitra, ary maro ireo olona no nahita fa naka sary tao amin'ny burger iray tao amin'ny In-N-Out, izay nanana fitoeran-drano maimaim-poana feno lemonade. dia nomeny azy hoe, 'Tsy dia io lemonade io.' "-Jimmy Fallon
"Androany i Eric Trump no niaro ny rainy tamin'ny 3 ora tao amin'ny Twitter momba ny Miss World Universe Alicia Machado, nilaza tamin'ireo mpanangom-baovao, 'Farany farafaharatsiny amin'ny ra amin'ny telo maraina.' Nahoana ianao no mieritreritra fa zavatra tsara izany? Fantatrao ve hoe iza no mipetraka aloha? "Manontany tena ny olona hoe aiza izy ireo no tsy mety amin'ny zanany." -Seth Meyers
Fihetsiketsehana ara-politika mampihomehy
Mahatsiaro mafana indrindra maneso ny Trano Fotsy Trump
Lohateny Lehibe Indrindra
25 taona an-jatony vaovao Donald Trump
Fitaovana trompetra tsara indrindra
Ny Diaben'ny Vehivavy Manenina indrindra dia manasonia an'izao tontolo izao
Fahatsiarovana tsara indrindra trompetra
Inona no atao hoe lahateny?
Fahatsiarovana Krismasy ho an'ny ankizy
Famaritana ny Hypothesis
Inona no satrita?
Sary fanao tsara indrindra
Meksikana Revolisiona: Ny Ady Tany Celaya
Ny Alaham-peo Mahavariana Indrindra
Endriky ny matoanteny amin'ny teny esperanto Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy amin'ny teny esperanto
Major Theories of Sociological
Inona no Tokony Hividianako Tranokely Hoe?
Ahoana ny fomba ampiasana ny teny hoe Qui sy hoe Que
Fomba hiomanana amin'ny fivoriana an-drenivohitra
Ny Fitsarana Maximin
Torohevitra hiarahana miasa amin'ny mpianatra manana fahasalamana mahery
Asa sy ny ilàna ny resonator
Fividianana Guitare: Overview
Ny faritr'i Galles Caesar momba ny ady hevitra
Tantaran'asa momba ny tantaran'ny Karate sy ny karazany